Apple neChina hurumende. The New York Times inoshora kubvumirana kwavo | Linux Vakapindwa muropa
Vashandisi vanofanirwa kuita chiyero chinogara chiripo pakati pekuita uye kuvanzika. Ndakatanga ichi chinyorwa ndichinyora mufoni yangu ndichishandisa Microsoft Office nhare yekushandisa. Iyo dhizaini yakachengetwa muOneDrive kudzamara ndazvigadzirisa muwebhu vhezheni yeOfisi 365 ndokuikopa muWordPress kuti vagokwanisa kuiverenga.
Zvese izvo zvakapa Microsoft yakawanda data pamusoro pangu. Dhata yandisina hanya kuti Microsoft inaro mukutsinhana nekuita kuti basa rangu rekunyora rive nyore.
Ehezve, dai iwe wainyora chirongwa chebhizinesi cheiyo nyowani yekushandisa system, kuronga kurwisa kwemagandanga, kana kugadzirisa unotevera mutengesi, iwe waizozviita muLibreOffice.
Iyo poindi ndeyekuti vashandisi vane kodzero yekutarisira inonzwisisika (asi kwete mhedziso) danho rekuvanzika. paunenge uchishandisa online software uye masevhisi. Uye kana tichizotenda iyo New York Times Apple yakafunga kubayira vashandisi vayo vechiChinese kuitira kuchengetedza hukama nehurumende yeChinese.
1 Nyaya yaTrieu Pham
2 Apple neChina hurumende. Bhizinesi nezvematongerwo enyika.
2.1 App kudzvinyirira
Nyaya yaTrieu Pham
Muna 2018, Guo Wengui, mubhabhadhi wechiChinese akadzingwa, uyo akashandisa yakawanda yenguva yake achiparadzira huwori mukati meChinese Communist Party, akafunga kuzvipa kuoneka kuburikidza nechikuva chitsva, chishandiso che iPhone. Neimwe nzira, iyo eInternet mutongi wenyika yeAsia akaziva uye akarayira kuti Apple isasanganise uyen iyo Chinese vhezheni yeApp Store.
Dare revatariri vakuru rakapindura kuchikumbiro uye Guo akaverengerwa mune runyorwa rwezvinyorwa zvisina kufadza hurumende yeChinese maari ari mukambani yeDalai Lama. Software yaive yakarongedzwa kuti angoerekana tag maapplication anozvitaura.
Imwe nguva gare gare, VaGou vakadzokororazve chikumbiro chavo chakashandurwa nenzira yekuti chakatadzisa kutonga. Trieu Pham, aive nebasa rekuiongorora, haana chaakawana chakatyora mitemo uye akatendera kuburitswa. Mukutarisana nekuratidzira kubva kuhurumende yeChinese, Apple yakatanga kuferefetwa kwemukati kwakaguma nekudzingwa kwemuongorori "kusashanda zvakanaka." Akabvumirana nedare redzimhosva izvo akafumura zvinyorwa zvakaunza pachena zvinonetsa mamiriro ehukama pakati peApple neChina.
Apple neChina hurumende. Bhizinesi nezvematongerwo enyika.
Apple mune zvese uye Tim Cook. mutungamiri wako kunyanya, Ivo vane chikwereti chakakura chekutenda kuhurumende yeChinese.
Cook ndiye uyo makore makumi maviri apfuura akatungamira kupinda kwekambani mumusika weChina. Kune hukuru hukuru kufamba uku tYakashandura Apple ikava kambani yakakosha kwazvo pasirese uye ikaiita iye anotsiva kuna Steve Jobs. Apple inounganidza angangoita ese zvigadzirwa zvayo uye inowana chimwe-cheshanu chemari yayo kubva kuChina dunhu. Kuti uwane izvi hurumende yeChinese akashandisa mabhiriyoni emadhora kugadzira migwagwa, kutora vashandi, uye kuvaka mafekitori, magetsi, uye dzimba dzevashandi.
Kunyangwe Apple ichipa madhora zviuru makumi mashanu nezvishanu pagore kunyika, hurumende haingodi chete mari yekunze. Uye akabata kambani yaSteve Jobs nemaapuro. Sekureva kwemupi weApple chipangamazano, hakuna imwe nyika inokwanisa kupa chiyero, hunyanzvi, zvivakwa uye rubatsiro rwehurumende. iyo Apple inoda. Nhasi kuChina angangoita ese maPhones, maPads nemaMac akaungana.
Nekuda kwekumanikidzwa nehurumende yeChinese, Apple yaifanirwa kuisa nzvimbo mbiri dzedhata munyika iyoyo kuchengetedza mafaira akachengetwa nevashandisi veChinese muICloud, lkudzikatidza mabhakuki emidziyo yako. Iyo zvakare inochengeta makopi emakiyi ekuvharira munyika iyoyo.
MuChina, yakapa manejimendi e data revatengi vayo kuGuizhou-Cloud Big Data, ukambani inochengetwa nehurumende yeGuizhou Province, Apple nguva pfupi yadarika yakakumbira vatengi vayo veChinese kuti vabvumirane nemitemo nemitemo mitsva yeICloud inonyora GCBD semupi webasa uye Apple se "bato rekuwedzera." Apple yakaudza vatengi shanduko yaive "yekuvandudza iCloud masevhisi kuChina ne
Mitemo nemamiriro acho zvaisanganisira chitsva chinowanikwa chisingaonekwe kune dzimwe nyika: "Apple neGCBD ichave nekwaniso kune data rese raunochengeta pane ino sevhisi" uye vanogona kugovana iyo data "kune mumwe nemumwe pasi pemutemo unoshanda."
Apple yakati iyo ayakaedzwa 91 muzana yehurumende yeChinese yekubvisa zvikumbiro, ichibvisa maapp1.217. Izvi zvakakwirira kwazvo kupfuura huwandu hwesanganiswa hwedzimwe nyika dzese padzakabvumidzwa. 40 muzana yezvikumbiro, kubvisa 253 mafomu. Iyo kambani yakataura kuti mazhinji maapps avakabvisa pachikumbiro chehurumende yeChinese aive nechokuita nekubhejera kana zvinyadzi kana kuti vaishanda vasina rezinesi rehurumende, senge masevhisi echikwereti uye mapurogiramu ekuparadzira ehupenyu.
Nekudaro, vaongorori vakazvimiririra vanochengeta izvo kubvira 2017, vangangoita zviuru makumi mashanu nezvishanu zvinoshanda zvakanyangarika kubva kuApple App Store muChina,
Kunyange anopfuura makumi matatu nemashanu emakumi maapplication aya yaive mitambo, iyo muChina inofanirwa kuwana mvumo yekutonga, yakasara zviuru makumi maviri zvaisanganisira maapplication ekuteedzera zviitiko zvemuviri, kubvumidza maSelfies, kana kuratidza nzvimbo dzepabonde. Vakanga vasiri kunyorera kwakabvumidza vashandisi kutumira meseji muchivande, kugovana magwaro, uye kutarisa mawebhusaiti akavharirwa uye, zvechokwadi, enhau dzenyika dzese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Apple neChina hurumende. The New York Times inopomera kubatana kwavo
11 Linux Kubatsira Vashandisi Vanofanira Kuziva